အတွင်းအလှတွေ လျံထွက် နေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ကြွေကျသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း – Shwe Sar
အတွင်းအလှတွေ လျံထွက် နေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ကြွေကျသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
မြင်သူတိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောက မှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရ ပါတယ်။
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်း လွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို “ဆိုင်တွေဖွင့် ရင် ကိုကိုအတူတူလည်မယ်လို့ဆိုတဲ့ ” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မော်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်
Previous post ပုရိသတွေ ကြွေသွားအောင် ဆက်ဆီ ကျကျ လျှာထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Next post ဓါတ်ဆရာ ရဲ့ ရိုက်ချက် ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကို ကြွေတာလား? လို့ ဆို လိုက်တဲ့ “သင်းရတီခင်”